जाडोमा छालालाई यसरी राख्नुहोस नरम र चम्किलो - Gokarna News
जाडोमा छालालाई यसरी राख्नुहोस नरम र चम्किलो
एजेन्सी– जाडो मौसम छालाको लागि अनुकुल मानिदैन । यसवेला वाहिरी वातारण सुख्खा हुन्छ । यसले छालामा सोझो असर गर्छ । अझ काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा धुलो धूँवाले छालालाई थप नोक्सान पुर्याउँछ ।
वाहिरी चिसो र भित्री ताताको सन्तुलन नमिल्दा पनि त्यसको प्रभाव छालामा देखिन्छ । त्यसैले जाडो याममा छालाको सौन्दर्य कायम राख्न बढी सजग हुनुपर्छ । छालालाई कसरी मुलायम, चम्किलो, रसिलो, स्वस्थ्य राख्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
जाडोमा खासगरी छाला रुखो हुने, फुट्ने, सुख्खा हुने समस्या हुन्छ । त्यस्तै छाला चिलाउने, हात गोडा फुट्ने, छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चाया–पोतो आउने तथा बढ्ने र रुखो हुने समस्या हुन्छ । अर्कोतिर टाउकोमा पनि चाया पर्ने गर्दछ ।
विशेषगरी जाडोमा बढी देखिने रोगहरुमा एक्जिमा र डर्माडाइटिस, पोलीमफिर्क लाईट इरप्सन, पोरोसिस, पर्नासिस (हात खुट्टाका औला सुन्निएर निलो हुने) आदी पर्दछन् ।
१. पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गरौं । वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गरौं, जसले छालामा पानीको अभाव पुरा गर्छ ।
८. मौसमी फलफूल सेवन गरौं, जसले जाडोमा छालाको सौन्दर्य कायम राख्छ ।
जाडोमा हिटर तापिन्छ । लामो समय हिटरको रापमा बस्दा त्यसले छालालाई रुखो बनाउँछ ।
अधिक तातो पानीले ननुहाउने
हल्का तातो पानीले नुहाएपश्चात्त मोइस्चराईजिङ्ग क्रिमको प्रयोग गर्ने
भित्र सुतीको लुगा लगाएर मात्र उनी लुगाको प्रयोग गर्ने । अन्यथा उनी लुगा सिधै लगाउँदा यसले छालामा एलर्जीको समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
जाडोमा छालाको स्याहार जस्तै कपाल पनि अछुतो रहदैन । कपालको हेरचाहका लागि सलफेट नभएको स्याम्पूको प्रयोग गर्नु पर्छ । यसले कपाल सुख्खा हुन दिदैन ।
त्यस्तै, जाडोमा यसै पनि हावा सुख्खा हुने भएकोले कपालमा आइरन तथा ड्रायरको प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरु सुझाव दिने गर्छन् । कन्डिसनर वा मोइस्चराइजर भएको हेयर प्याक लगाउन सकिन्छ ।
जाडोमा जति छालाको हेरचाह आावश्यक छ, अनुहारको हेरचाह गर्न पनि त्यति नै आवश्यक छ । विशषगरी जाडोमा बढी समय घाममा बसिरहने हुदाँ अनुहार कालो हुने , अनुहारमा चाया आउने तथा पोतो आउने डर हुन्छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि जाडोमा सनक्रिमको प्रयोग बढी गर्नुपर्छ । सकेसम्म एसपिएफ बढी भएको क्रिमको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
जाडोमा खुट्टाको हेरचाह पनि उत्तिकै जरुरी छ । जाडोमा हावा सुख्खा हुदाँ अधिकांश मानिसमा खुट्टा फुट्ने समस्या धेरै हुने गर्छ । यसको रोकथामको लागि पनि मोइस्चराईजर क्रिमको साथमा राती मोजा लगाएर सुत्नु राम्रो हुन्छ । यसले छाला नरम बनाउनुका साथै छालालाई फ्ट्न दिदैन ।
हुन त जाडोमा छालाको स्याहार भन्न साथ हाम्रो दिमागमा ग्लिसिरिन तथा मोइस्चराईजरको प्रयोग नै भन्ने बुझिन्छ । जबकी आवश्यक मात्रामा फयाटी एसिड, माछाको तेल, प्रिम रोज तेल, एभोकार्डो , आलस इत्यादीको सेवन बढाएर पनि छालाको सुख्खापनालाई जराादेखि हटाउन सकिन्छ ।
म्याट बाल्दा किन लामखुट्टे भाग्छ ? यस्तो पो रहेछ कारण
आफ्नो पैसाको राम्रो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पैसा कसरी बढाउने ?